အဓိကအကြောင်းရင်းများ: အ HARD DISK ကို FORMAT မနေပါနဲ့ - HARD DISK ကို - 2019
HDD ကို format - လျင်မြန်စွာပေါ်မှာသိမ်းထားတဲ့အားလုံးဒေတာကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဖိုင်ကိုစနစ်အားပြုပြင်မွမ်းမံရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစမကြာခဏ operating system ကိုတစ်ဦး "စင်ကြယ်သော" တပ်ဆင်ခြင်း, ဒါပေမယ့် Windows ကဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ဆောင်မပြုစေခြင်းငှါအရာအတွက်တခါတရံတွင်ပြဿနာကို format ကိုအသုံးပြုသည်။
အဆိုပါ hard disk ကို format မအကြောင်းရင်းများ
ဒါကြောင့် drive ကို format ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာအတွက်အများအပြားအခြေအနေများရှိနေပါသည်။ ဒါဟာအားလုံးအသုံးပြုသူ HDD စစ်ဆင်ရေးနှင့်ဆက်စပ်သောတစ်ဟာ့ဒ်ဝဲသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအမှားအယွင်းများရှိ, မရှိ, ထိုပုံစံချပေး start ဖို့ကြိုးစားပါတယ်သည့်အခါပေါ်တွင်မူတည်သည်။
တနည်းအားဖြင့်အကြောင်းပြချက်အချို့ operating system ကို setting များကိုကြောင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ဆောင်ပေးဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၌၎င်း, ကိုလည်းကြောင့်ပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ device ကိုပြည်နယ်၏အစိတ်အပိုင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာအိပ်ရလိမ့်မည်။
အကြောင်းပြချက် 1: စနစ် drive ကို format မနေပါနဲ့
သင်လက်ရှိလည်ပတ်နေ operating system ကိုပေးသော မှစ. , HDD ကို format ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်: ပုံမှန်အားဖြင့်သာအသစ်ရောက်ရှိလာသောကြုံတွေ့ဘာနှင့်အတူပါဆုံး legkorazreshimaya ပြဿနာ။ ၏သင်တန်း, Window mode ကို (သို့မဟုတ်အခြား OS ကို) မှာသူ့ဟာသူမဖယ်ရှားနိုင်ပါ။
ဒီဖြေရှင်းချက်ကအရမ်းရိုးရှင်း: သင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပုံစံတစ်ခုကို USB drive ကနေ boot ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သတိပေးခြင်း! ထိုသို့သောအရေးယူ OS ကို၏ဗားရှင်းအသစ်ကို install မလုပ်ခင်အကြံပြုသည်။ အခြား drive ကိုမှသင်၏ဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းဖို့ကိုမေ့လျော့မနေပါနဲ့။ ပုံစံပြီးနောက်, သင်တို့သည်နောက်တဖန်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့ဖူးသော operating system ကိုမှ boot နိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင်ခန်းစာကို: တစ် bootable USB က Flash ကို Windows 10 ကို UltraISO Creating
တစ်ဦးကို flash drive ကနေ boot ဖို့ BIOS ကိုပြုပြင်မည်။
ပိုများသော: အ BIOS ကိုတစ်ဦးကို flash drive ကနေ Boot တက်မှဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ
နောက်ထပ်ခြေလှမ်းများသင်အသုံးပြုလိုသော OS ကိုပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားကြလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် format ကိုလည်ပတ်မှုစနစ်၏နောက်ဆက်တွဲတပ်ဆင်ဘို့, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်အပိုဆောင်းကိုင်တွယ်ခြင်းမရှိဘဲသော်လည်းကောင်းထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
format ပြီးတော့ (ဥပမာတစ်ခုအပေါ်ကို Windows 10) operating system ကို install လုပ်ရန်:
Installer ကိုကကမ်းလှမ်းခြေလှမ်းများကတဆင့်သွားပါ။ ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ။
အဆိုပါ activation key ကိုရိုက်ထည့်ပါသို့မဟုတ်ဤခြေလှမ်း skip ။
အဆိုပါ OS ကို၏ဗားရှင်းကိုရွေးချယ်ပါ။
တပ်ဆင်၏အမျိုးအစားကိုရွေးပါ "Update ကို".
သင် OS ကို install လုပ်ဖို့တည်နေရာကိုရွေးချယ်ရမည်ရှိရာပြတင်းပေါက်ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။
အောက်ပါပုံရိပ်မှာသင်ကော်လံ၏အရွယ်အစားနှင့်အမျိုးအစားပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ရှိရာအချို့သောကဏ္ဍများဖြစ်စေခြင်းငှါတွေ့နိုင်ပါသည်။ စနစ် (back-up), နှင့်အရာကြွင်းလေ - - သုံးစွဲသူ (သူတို့စနစ်ကအဖြစ်ကောင်းစွာ installed ပါလိမ့်မည်) ကိုသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကဏ္ဍများ။ သငျသညျကို clean up ချင်သော partition ကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Format ကို".
ထိုအခါသင်သည် Windows အတွက်တပ်ဆင် partition ကိုရှေးခယျြနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ OS ကို install လုပ်မပါဘဲ format ရန်:
Installer ကိုစတင်ပြီးနောက်ကလစ် shift + F10 cmd ကို run ရန်။
ဒါမှမဟုတ် link ကို click နှိပ်ပြီး "System Restore".
ကို Select လုပ်ပါ "ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း".
ထို့နောက် - "အဆင့်မြင့် Settings" ကို.
ယင်း utility ကို Run "Prompt ကိုဆင့်ဆို".
partition ကိုလေ့လာပါ / (OS ကို Explorer ကိုပြသခဲ့တထံမှကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်) အစစ်အမှန်စာတစ်စောင်ကိုမောင်း။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, အမျိုးအစား:
wmic logicaldisk get deviceid, volumename, အရွယ်အစား, ဖော်ပြချက်
ထိုစာ (bytes ဖြင့်) ကိုအသံအတိုးအကျယ်၏အရွယ်အစားရှိနိုင်ပါသည်ဆုံးဖြတ်ရန်။
အလျင်အမြန် HDD ကို format စေရန်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်:
ပုံစံ / FS: NTFS က X: / q
ပုံစံ / FS: FAT32 က X: / q
အစား X ကို သင့်လျော်သောစာတစ်စောင်ကိုအစားထိုး။ သင် disc ကိုပေးချင်သောဖိုင်ကိုစနစ်၏အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ပထမဒါမှမဟုတ်ဒုတိယအသင်းကိုသုံးပါ။
သငျသညျအပြည့်အဝ format နဲ့လုပ်လိုပါက parameter သည် add ပါဘူး / q.
အကြောင်းမရှိ 2: မှားယွင်းနေသည်: "ကို Windows ပုံစံဖြည့်စွက်လို့မရဘူး"
သင့်ရဲ့အဓိက drive ကိုသို့မဟုတ်ဒုတိယ (ပြင်ပ) HDD နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါဒီအမှားဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာ, ရုတ်တရက်တပ်ဆင်ပြီးနောက်ကြားဖြတ်။ မကြာခဏ (သို့သော်မပေးသေချာပေါက်) က hard drive ကို RAW format နဲ့ဖြစ်လာနှင့်ဤအပြင်ကပြန် NTFS သို့မဟုတ် FAT32 ဖိုင် system ကိုစံနည်းလမ်းမှစနစ်ကို format လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ထိုပြဿနာများ၏ပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်ပြီး, သင်အတော်ကြာအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, ရဲ့ရှုပ်ထွေးဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ထံမှသွားကြကုန်အံ့။
အဆင့် 1: လုံခြုံတဲ့ Mode ကို
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်သည်ကို run အစီအစဉ်များ (ဥပမာ, antivirus ကို, Window န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ထုံးစံဆော့ဖျဝဲ) ၏။
Safe Mode ကိုအတွက် Windows ကိုစတင်ပါ။
Safe Mode ကိုအတွက် Windows 8 ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်လုပ်နည်း
ဘေးကင်းလုံခြုံ mode မှာ Windows 10 ကို Download လုပ်နည်း
သင်ဤလုပ်ဖို့များအတွက်အဆင်ပြေ format ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: drive ကို format လုပ်နည်း
အဆင့် 2: chkdsk
ရှိပြီးသားအမှားများကိုဖယ်ရှားပစ်နှင့်မကောင်းတဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုပျောက်ကင်းစေကူညီရန်ဤသည် built-in ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Start" ရေး cmd.
ထို option ကိုရွေးပါဖြစ်လျှင်, right-click context menu ကို၏ရလဒ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ် Run".
chkdsk X ကို: / r ကိုf/
အဲဒီအစား X ကို၏, check လုပ်ထားရပါမည်သည့်အခနျးကနျ့ / disk ကို၏အက္ခရာအစားထိုး။
အဆိုပါစကင် (နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်လျှော့ချရေး) ပြီးနောက်ယခင်အချိန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ကဲ့သို့တူညီသောထုံးစံအတွက် disk ကို format ထပ်မံကြိုးစားပါ။
အဆင့် 3: စစ်ဌာနချုပ်လိုင်း
cmd ကတဆင့်လည်း drive ကို format နိုင်ပါတယ်။ အတွက်ညွှန်ပြသကဲ့သို့, Run ခြေလှမ်း 1.
နှစ်သက်တဲ့ file system ကိုအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ။
အပြည့်အဝပြင်ဆင်ထားသောအရာများအဘို့, သင် parameter သည် / q ကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်သင့်ရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုအတည်ပြု Y ကပြီးတော့ Enter ကိုနှိပ်။
သင်တစ်ဦးအကြောင်းကြားစာကိုမြင်ရပါလျှင် "ဒေတာများအမှား (စီအာစီ)"ထိုအခါလာမည့်ခြေလှမ်းများကိုကျော်သွားနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖတ်ရှု နည်းလမ်း 3.
အဆင့် 4: အဆိုပါစနစ်အား disk ကို utility ကို
စာနယ်ဇင်းများ ဦးဝင်း + R ကို ရေး diskmgmt.msc
သင့်ရဲ့ HDD ကိုရွေးချယ်ပါနှင့် function ကိုစတင်ရန် "Format ကို"ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကို (ယွမ်) ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
setting များကိုများတွင်လိုချင်သောဖိုင်စနစ်နှင့် Uncheck ကို select "လျင်မြန်စွာစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ".
အဆိုပါ disk ကိုဧရိယာလုံးဝအနက်ရောင်ဖြစ်ပြီး၏ status ရှိပါက "ခွဲဝေမထားသူ", ထိုအခါ Context Menu ကဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် PTP ကို ​​select "New Simple Volume".
သင်မဖြစ်မနေပုံစံချပေးနှင့်အတူသစ်တစ်ခု partition ကိုဖန်တီးကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟု program တစ်ခုစတင်ပါ။
ဒီအဆင့်မှာသင်အသစ်တစ်ခုကို volume ၏ဖန်တီးမှုများအတွက်ပေးဆောင်ချင်ဘယ်လောက်ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။ အားလုံးလယ်ကွင်း Leave အပေါငျးတို့သရရှိနိုင်အာကာသသုံးစွဲဖို့ default အနေဖြင့်အတွင်းပြည့်ရကြ၏။
လိုချင်သော drive ကိုစာတစ်စောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
အောက်ပါပုံရိပ်မှာသည်အတိုင်း, format နဲ့ options ကို Configure ။
အဆိုပါအရန် tool ကို၏ပိတ်ပစ်။
ပုံစံချပေး၏ရလဒ်အတွက်အမှားအယွင်းများကိုထပ်ပေါ်လာမည်မဟုတ်လျှင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်တွင်နေရာလွတ်ကိုစတင်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီခြေလှမ်းကိုကူညီမပါဘူးဆိုရင်, လာမယ့်သွားပါ။
အဆင့် 5: third-party အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်း
သင်က standard Windows ကိရိယာတွေအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ငြင်းဆန်သည့်အခါအချို့ကိစ္စများတွင်ကပုံစံချပေးကိုင်တွယ်ခံရပ်သွားအဖြစ်, Third-party software များ၏အားသာချက်ယူရန်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။
Acronis Disk ကိုဒါရိုက်တာမကြာခဏ HDD တွေနဲ့အမျိုးမျိုးသောပြဿနာများဖြေရှင်းရေးအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိ interface ကိုအပြင်ပုံစံချပေးဘို့ရှိသမျှကိုလိုအပ်သော tools တွေရှိပါတယ်။ အဓိကအားနည်းချက်ကတော့ - အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အောက်ခြေအနီးပြဿနာ disc ကို Select လုပ်ပါနှင့်လက်ဝဲကော်လံ၌သင်တို့ရှိသမျှကိုမရရှိနိုင်ကိုင်တွယ်မြင်လိမ့်မည်။
စစ်ဆင်ရေးကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Format ကို".
လိုအပ်သောတန်ဖိုးများ (များသောအားဖြင့်အားလုံးလယ်ကွင်းကိုအလိုအလျောက်အတွက်ဖြည့်ကြသည်) Specify ။
Wizard ကိုအခမဲ့ပရိုဂရမ်ကိုလည်းတာဝန်အဘို့သင့်လျော်သည် partitioner က MiniTool ။ ဒီတာဝန်ဖျော်ဖြေ၏အလွန်ဖြစ်စဉ်ကိုအစီအစဉ်များအကြားသည်အလွန်ကွာခြားပါဘူး, ဒါကြောင့်သင်အဲဒီမှာရွေးချယ်ရေးမရှိအခြေခံခြားနားချက်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားဆောင်းပါးထဲမှာ, hard drive ကိုဤအစီအစဉ်ပုံစံများအတွက်လမ်းညွှန်ရှိသေး၏။
သင်ခန်းစာကို: drive ကိုအစီအစဉ်ကို MiniTool Partition ခွဲ Wizard ကိုပုံစံချမှု
HDD အနိမျ့အဆင့် Format ကို Tool ကိုရိုးရှင်းပြီးလူသိများတဲ့အစီအစဉ်ကိုပုံစံ (က "low-level" တွင်ဟုခေါ်သည်) သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြီးပြည့်စုံဖျော်ဖြေဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ မည်သည့်ပြဿနာမျှလျှင်, ငါတို့သည်ဒါခေါ် low-level option ကိုအသုံးပြုခြင်းအကြံပြုပါသည်။ ကျနော်တို့အရင်ကအသုံးပြုဘယ်လိုရေးထားပြီ။
သင်ခန်းစာကို: HDD အနိမျ့အဆင့် Format ကို Tool ကိုအတူ disk ကိုပုံစံချမှု
အကြောင်းပြချက် 3: မှားယွင်းနေသည်: "ဒေတာများအမှား (စီအာစီ)"
အထက်ပါအကြံပြုချက်များပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမကူညီနိုငျ "ဒေတာများအမှား (စီအာစီ)"။ သူမ၏သင် command line ကိုပုံစံချ start ရန်ကြိုးစားသောအခါသင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ Disk မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုကိုအထောက်အထားဖွယ်ရှိသည်, ဒါကြောင့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်ကြောင့်အသစ်တခုတဦးတည်းအတူကအစားထိုးရန်လိုအပ်ပေသည်။ လိုအပ်သောလျှင်သင်န်ဆောင်မှုအတွက်ရောဂါကပေးနိုင်ပါသည်, သို့သော်ငွေရေးကြေးရေးအကုန်အကျရှိနိုင်ပါသည်။
အကြောင်းပြချက် 4: မှားယွင်းနေသည်: "ရွေးချယ်ထားသည့် partition ကို format ရန်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ"
ဒါဟာအမှားတခါမှာအတော်ကြာပြဿနာများယဘေုယနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးခြားနားချက်အမှား၏စာသားပြီးနောက်စတုရန်းကွင်းခတ်သောကုဒ်၌တည်ရှိ၏။ သငျသညျထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမတိုင်မီမည်သည့်ကိစ္စတွင်, အမှားအယွင်းများ utility ကို chkdsk များအတွက် HDD စစ်ဆေးပါ။ ဒီအလုပျအထက်ကြည့်ဖို့ကိုဘယ်လို နည်းလမ်း 2.
သငျသညျကို Windows ကို reinstall လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအများစုကမကြာခဏကြောင့်ပေါ်လာသည်။ အသုံးပြုသူဒါမှမဟုတ် OS ကို installer ကိုမှတဆင့်သို့မဟုတ်လုံခြုံတဲ့ mode ကိုတဆင့်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးစံလမ်းအတွက်ပုံစံလုပ်လို့မရပါဘူး။
က fix, သင်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ, အဲဒီနောက်အသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းဖန်တီးကြောင့် format ရမည်ဖြစ်သည်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း Windows Installer ၌သင်ဤသို့ပြုနိုင်သည်
ကီးဘုတ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ shift + F10 cmd ဖွင့်လှစ်ရန်။
ယင်း utility ကို diskpart စတင်ရန် command တစ်ခုရေးရန်:
လူအပေါင်းတို့သည်တပ်ဆင်ထား volumes ကိုကြည့်ရှုရန် command ကိုရေးရန်:
စာရင်း disk ကို
ထိုပြဿနာကိုရွေးချယ်တဲ့ command ကိုရေးရန်:
disk ကို0င်ကို select
ကြောင်း neformatiruyuschiysya ဖယ်ရှားပေးမယ့် command ကိုရေးရန်:
ထို့နောက်2ကြိမ်ထွက်ပေါက်ရေးရန်နှင့် command prompt ကိုပိတ်ပါ။
ဒီနောက်, သငျသညျတူညီသောခြေလှမ်းအပေါ်ကို Windows Installer အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ စာနယ်ဇင်းများ "Update ကို" နှင့် (လိုအပ်ပါက) အပိုင်းဖန်တီးပါ။ အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းဆက်လက်နိုင်ပါသည်။
သငျသညျကို Windows ကို install ရန်ကြိုးစားသောအခါလည်းသူကပေါ်လာသည်။ ဒါဟာ partitions ကိုယခင်က (အထကျတှငျဆှေးနှေးခဲ့သည့်အလားတူအမှား, အတူအမှု၌ကဲ့သို့) ဖယ်ရှားခဲ့ကြလျှင်ပင်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ဆော့ဖ်ဝဲနည်းလမ်းကဒီအမှားဖယ်ရှားပစ်ရမနိုင်လျှင်, အဲဒါကိုသဘာဝခက်ခဲကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ ပြဿနာများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် hard drive ကို၏မသင့်တော်သော, နှင့် power supply နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဖုံးလွှမ်းစေနိုင်သည်။ Check စစ်ဆင်ရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီမှလှည် ့. သို့မဟုတ်လွတ်လပ်စွာအခြား PC ကိုမှ device ကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့က Windows အတွက် hard drive ကိုဒါမှမဟုတ် operating system ကို installation ကို format ရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါကြုံတွေ့အဓိကပြဿနာများပြန်လည်သုံးသပ်။ မျှော်လင့်ဤဆောင်းပါးကိုသင်တို့၌အထောကျအကူများနှင့်သိကောင်းစရာများဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှားဆက်ရှိနေသေးပါက, ကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်များအတွက်သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြငါတို့သည်ဖြေရှင်းကူညီနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။